Patmosy - Wikipedia
Ny nosy Patmosy, sary tamin'ny taona 1885.
I Patmosy na Patmo dia nosin'i Gresy ao amin'ny Ranomasina Egea ao amin'ny ilany avaratry ny tangoro-nosin'i Dodekanesa (grika: Δωδεκάνησα / Dōdekánēsa). I Patmosy dia hita ao akaikin'ny morontsiraka torka, ao atsimon'ny nosy Samosy. Manana velarana 34 km2, ary misy mponina 2 400 eo ho eo tamin'ny taona 1991. Atao hoe Πάτμος / Patmos izy amin'ny teny grika.
Ity nosy kely karankaina ity dia miendrika tsinam-bolana sady manana nofon-tany volkanika. Ny voaloboka sy ny voatabia ary ny varimbazaha no tena fambolin'ny olona ao. Ny tanàna lehibe indrindra ao dia i Patmosy ao amin'ny ilany atsimo atsinanan'ilay nosy.
Ny Monasteran'i Masindahy Joany Teolojiana ao amin'ny nosy Patmosy.
Manerinerina ao amin'io tanàna io ny Monasteran'i Masindahy Joany Teolojiana (grika ankehitriny: Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου / Moní Ayíou Ioánnou tou Theológou), izay naorin'i Masindahy Kristodolosy (grika: Όσιος Χριστόδουλος) tamin'ny taona 1088 noho ny fanampian'ny emperora Aleksiosy I Komnenosy (grika: Ἀλέξιος Αʹ Κομνηνός).
Mbola ahitana fanangonana asa soratra misy tamin'ny taonjato faha-5 ny ao amin'io nosy io, ahitana sary hosodoko koa ao. Ny tanànan'i Venitia (Italia) no nanapaka io nosy io, avy eo ny Torka, avy eo i Italia ary farany ny Grika nanomboka tamin'ny taona 1947.
I Joany Apostoly ao amin'ny nosy Patmosy, sary nataon'i Jacopo Vignali tamin'ny taonjato faha-17.
Ny Zohin'ny Apokalipsy
Araka ny lovantsofina kristiana izay mbola iandian'ny mpahay tantara hevitra mandraka androany dia tao amin'ny nosy Patmosy no nanoratan'i Joany ny Bokin'ny Apokalipsy na Apokalipsa, tao amin'ny zohy eo ampoto-tendronbohitra, ilay ahitana ny monastera ankehitriny. Maro ankehitriny ny olona mitsidika sy manao fivahiniana masina ao amin'io zohy io izay nanjary lasapely amin'izao fotoana izao.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Patmosy&oldid=977563"
Voaova farany tamin'ny 22 Novambra 2019 amin'ny 15:32 ity pejy ity.